ISpanish misika yemusika pamisika yegore negore Ehupfumi Zvemari
Mari dzakatambira hadzina kugashira mushe kudzoka kwemazororo kune chikamu chevashambadziri kumatara ekutengesa. Kana zvisiri izvo zvinopesana uye kusvika pakumaka mwaka wepasi mune iri gore rakaipa kune vashandisi vestoko. Iko indexmarkmark yeiyo nyika stock market, iyo Ibex 35, yanga yave padyo nematanho eiyo 9.200 points uye nekatsika kekudzika mukudonha, kunyangwe kurova pasi rutsigiro rwakakosha urimo mu 9.000 points. Kune atove chikamu chakanaka chevaongorori vanotaura kuti chokwadi ichi chatova nyaya yemazuva uye chinogona kuitika muzvikamu zvinotevera zvekuchengetedzeka kwekutengesa.
Kubva pane ino yazvino inoshungurudza mamiriro, zviri nyore kuongorora zviitiko izvo zvakatungamira nyika equities kusvika izvi mazinga akaderera kwazvo uye panguva imwe chete ndichishushikana. Kuti nenzira iyi, iwe ugone kuziva zvavanofanira kuita nemari yavo kubva panguva idzi chaidzo. Hazvishamisi kuti, kuderera kweiyo yakasarudzika indekisi yemusika wemari yenyika iri kuramba ichinyanya kuzivikanwa. Iko kune diki diki tariro data ndeyekuti kwave kwatove nenhamba yakanaka yevarimi vakasiya maSpanish equities, zvese maererano nezvenyika nenyika yepasi rose capital.
Chero zvazvingaitika, imwe yekiyi idiki uye yepakati varimari yavanoda kujekesa ndeyekuti kufamba uku kuchazogara kwenguva pfupi here kana kana, nekusiyana, kuchaenderera kwenguva refu. Kusvika padanho rekutanga a rova yeimwe nguva yenguva. Saka kuti iwe unzwisise zviri kuitika muSpain tiri kuzokupa zvimwe zvezvikonzero zviri kutungamira kune Ibex 35 iri munzvimbo yakaoma. Iko kutya kwekutora zvinzvimbo mumitengo yemusika weSpanish stock iripo mune avo sarudzo.
1 Pakudzikira kwegore rega: zvikonzero zvako
2 Mutengo wemafuta anodhura kwazvo
3 Kusagadzikana kwezvematongerwo enyika kuSpain
4 Zvinetso muCommunity Union
5 Bank kushaya simba
6 Kutora mweya kune vanoita mari
Pakudzikira kwegore rega: zvikonzero zvako
Chimwe chezvinhu zvikuru zvinokonzeresa mamiriro ezvinhu aya pamusika wemasheya wenyika inyaya yekudzikira kwehupfumi hwayo. Ongororo dziri kuitwa nemasangano akasiyana siyana epasirese uye epasi rese nemasangano anoenda kunzira iyi. Neinoshamisa kuderera mune zvehupfumi zviitiko, kunyangwe zvisiri zvehupfumi hweSpanish chete, asi zvinopesana zvinokanganisawo nyika dzakavakidzana. Chero zvazvingaitika, chiitiko chitsva chekuti misika yemasheya iri kutengesa uye mune iyi pfungwa nekudzokorodza mumutengo wezvikamu.
Imwe yemasekete anonyatso kutora maitiro aya pasina mubvunzo kushanya. Iko panguva ino yezhizha rapfuura pakave ne kuderera muhuwandu hwevashanyi yepasi rose padhuze ne4%. Ichi chiratidzo chakajeka chekuti hupfumi hwapera simba uye kuti hunogona kuve nemhedzisiro. Kunge mamwe matunhu akakosha kukosha, senge mota chikamu kana indasitiri pachayo muSpain. Kwete zvisina maturo, zvegore rino zvinotarisirwa kuti Gross Domestic Chigadzirwa (GDP) ichawira pamatanho e2% kana kunyanyisa zvakanyanya.
Mutengo wemafuta anodhura kwazvo
Hapana mubvunzo kuti kukwira kwemutengo wegoridhe nhema ndechimwe chezvinhu zvinokonzeresa mamiriro azvino ehurumende dzeSpanish uye nekuwedzera pasirese. Kusvika pakuti iri kuita zvakawanda kukuvadza kune hupfumi hwavo. Nekuti mukuita, mutengo wazvino wemutengo wedhiragi isina kuchena wakwira kusvika anenge madhora makumi mapfumbamwe, danho risingaonekwe mumisika yemari kwenguva yakareba. Kunyangwe paine zvido zvemamwe masangano epasirese kuti zvisadaro. Asi ichokwadi kuti iri kuyera zvido zvevashambadzi vadiki nepakati, sezvakafambira mberi chikamu chikuru chevanoongorora zvemari.
Kune rimwe divi, ratidza kuti oiri isina kugadzirwa chinhu chakakosha paramende kuti uzive kuri kuenda musika wemasheya. Sezviri kuitika mazuva ano uye kuti ivo vava kuda kupedza kukwira kwenyowani mumisika yemasheya yakave yakagadzirwa kwemakore akawanda kudaro. Chaizvoizvo kubva dambudziko rezvehupfumi rakapera uye izvo zvakatungamira kune iyo kuwedzera kukoshas akaiswa mumaaccounts evatengesi kwenguva yakanaka yenguva. Naizvozvo, zvichave zvakafanira kuziva nezve iyo nhema matengo egoridhe kubva zvino zvichienda mberi.
Kusagadzikana kwezvematongerwo enyika kuSpain
Ehezve, nyaya yezvematongerwo enyika ndeimwe yezvinhu zvisina kunaka kunge yasvika padanho remutengo razvino. Uine vashoma hurumende Uye nematanho ezvehupfumi matanho ayo misika yezvemari isina kufarira, hazvishamise kuti musika wekuSpain wemusika wakadzikira munguva ino. Uye zvakare, hazvigone kukanganwika kuti panogona kunge paine sarudzo mumwedzi iri kuuya uye chokwadi ichi hachifadze kumisika nevatengesi zvakare. Iko kutengesa kuri kunyatso kumisikidzwa pakutenga uye izvi zvinowoneka mukuderera kwemutengo wemugove.
Chimwe chezvinhu zvakakosha zvakanyanya chave chiri icho kuparadza basa pakupera kwemazororo, iine rimwe rematanho akaipisisa mumakore apfuura. Kuve chimwe chezvinhu izvo zviri kudzinga vatengesi kubva kumisika yemasheya. Nekuti zvirizvo, kusahadzika kunorwisa vamiririri ava kwakawanda uye kwakasiyana hunhu uye ichi chinhu chiri kutamba zvichipesana nezvido zvevamiriri vezvemari vakabatana nehumende. Pasina parizvino pange paine chero zviratidzo zvekudzikamisa misika yezvemari. Neichi chikonzero, iko kudonha kwazvino kunogona kuramba kuripo kwenguva yakareba.
Zvinetso muCommunity Union
Kana izvo zviri kuitika munharaunda yenzvimbo hazvibatsire pamusika wemasheya. Iko kune kupatsanurana kupfuura nakare uye chero nguva chero chinhu chinogona kuputika. Nevamwe mabiko echinyakare izvo zviri mukuderera kuri pachena kwezvibatsiro kubva kune mamwe masimba masimba ari kuwana kuvimba kwevavhoti. Kunyangwe izvo zvingafungwe nevanhu vazhinji, ichi chimwe chinhu chiri kutengesa pamusika wemasheya uye kunyanya mune yedu, inova imwe yevasina kusimba mukondinendi yekare.
Izvo zvinofanirwa kutarisirwa mupfungwa kuti dzakasiyana dzeEuropean stock exchanges hadziite zvakanaka kana, asi pane zvakapesana. Icho chikonzero chinofanirwa kutsvagwa kune dzimwe nhau dzezvematongerwo enyika dziri kusimukira mudunhu reyuro. Kurongeka kwenzvimbo uko kusingabatsiri zvakanyanya kuchengetedza zvine pundutso panguva ino chaiyo. Asi pane zvinopesana, enda kune dzimwe nzvimbo dziri kuve neshanduko iri nani mumakosi avo emusika wemasheya. Semuenzaniso, mu US equities, chimwe chezvinhu zvinotyisa kwazvo pasirese.
Bank kushaya simba
Musika wepasi rose wemusika uri kukanganiswa zvakanyanya nezviito zve mabhangi pane stock stock. Kusvika padanho rekuti ndiyo chikamu chakaipisisa muSpain, nekudzikira kwakakosha mumutengo wemasheya ayo. Haisi nzvimbo dzakanakisa dzekuve izvozvi. Kwete zvishoma. Sezvo tarisiro yechikamu chakakosha ichi hachisi chakanyanya kunaka icho vatengesi vadiki nepakati vanogona kutarisira. Pane zvimwe zvakawanda zvinogona kurasika pane zvakawanikwa uye iri zano raunofanira kuchengeta mundangariro kubva zvino zvichienda mberi.
Iyo misiyano iyo mabhangi eSpain anowana neruremekedzo kune mamwe matekiniki mumusika wemasheya anodarika zvinozivikanwa uye mune dzimwe nguva pamusoro pe5%. Zvisinei, vamwe vanotenda kuti simba ravo rekudzoreredza rinogona kunge rakakwira nekuda kwekuti vakadonha zvakanyanya mumusika wemasheya. Chero nzira, mabhangi ndomumwe weakanyanya kurasikirwa mumwedzi mipfumbamwe yegore. Nekuderera kunosvika pamatanho angangoita gumi%, izvo zviri kutaura zvakawanda mumusika wekutengesa.
Kutora mweya kune vanoita mari
Kune rimwe divi, kune zvekare kumwe kuneta kune chikamu chevashambadziri. Hazvishamisi kuti anga ave makore mazhinji akanaka uye inguva yekuwana mabhenefiti. Kunyanya, kupihwa zviratidzo zvekushaya simba izvo misika yezvemari iri kupa. Nekuti pachave nenguva yekutenga masheya ku yakanyanya kukwikwidza mutengo uye kuti inogona kuita kuti mashandiro abatsire zvikuru. Nekuti hazvigone kukanganwika kuti hapana chinokwira nekusingaperi, ndoda musika wekutengesa, sezvo iwe pachako uchizoziva kubva pakudzidza kwakaunganidzwa pamusoro pemakore nemakore.
Chero zvazvingaitika, ivo vachange vakamirira mamiriro emusika kuti ave akanakisa zvakare. Pakati pezvimwe zvikonzero nekuti hapana dzimwe nzira dzakanyanyisa dzekuita kuti mari ichengetwe, kunyanya kubudikidza nezvigadzirwa zvemari yakatarwa. Nebudiriro yakaderera iyo isiri kuita kuti inakidze kune vese vatengesi. Izvi ndizvo zvinotsanangurwa nevaongorori kutaura kuti musika wekutengesa uchafanirwa kutangazve nzira yekumusoro mukati megore rinotevera. Kunyangwe izvozvi mamiriro asiri iwo akanyanya kunaka kutora zvinzvimbo mumusika wemasheya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Iyo yeSpanish misika yemari pamari yepagore